के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फेसबुक र ट्विटर चलाउन थालेका हुन्? - Nepal Factcheck
के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फेसबुक र ट्विटर चलाउन थालेका हुन्?
यति धेरै मिडियामा समाचार आएको देखेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै आधिकारिक ट्विटर भएर त लेखियो होला नि भन्ने लाग्न सक्छ। पूर्वराजा अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएकै हुन् त?
के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल भन्दै मिडियामा आउने समाचार सही हुन् ? के पूर्वराजा सामाजिक सञ्जालमा छन्? हाम्रो फ्याक्टचेक #NepalFactCheck #FightingDisinfo pic.twitter.com/8JNs4rcwEW
— Nepal Fact Check (@NepalFactCheck) April 19, 2020
पाठकले कसले पूर्वराजाको नाममा सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेको छ भनेर आफूले पनि खोजिरहेको जानकारी दिए। अर्थात् मिडियाले पूर्वराजाको आधिकारिक भनेर दिएका जानकारीहरु फेक अकाउन्टका हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। पूर्वराजा न फेसबुक चलाउँछन्, न ट्विटर।